को हुन् अनन्तराम? जो विश्व कीर्तिमानका लागि ९० घण्टा दिदैछन् प्रवचन – Chetananews.com
को हुन् अनन्तराम? जो विश्व कीर्तिमानका लागि ९० घण्टा दिदैछन् प्रवचन
२६ श्रावण २०७५, शनिबार १४:३२ 107 पटक हेरिएको
काठमाडाैं – योगसाधक एवं उत्प्रेरक वक्ता अनन्तराम केसीले विश्व कीर्तिमान राख्ने उद्देश्यसहित ९० घण्टा निरन्तर वक्तव्य-प्रवचन दिने हुनुभएको छ । नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका-१, हाल टोखा नगरपालिका-११ निवासी केसीले नेपालीको गौरवपूर्ण इतिहास रच्न आफूले आगामी भदौ ११ गतेदेखि विश्वको सबैभन्दा लामो प्रवचन दिन लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि भारत केरलाका केपी भल्सराजनको ८१ घण्टा १६ मिनेट निरन्तर प्रवचन दिएको विश्व कीर्तिमान कायम भएको छ । निरन्तर प्रवचनको क्षेत्रमा आफूले नयाँ कीर्तिमान राख्ने तयारीमा लागेको केसीले बताउनुभयो । उहाँले आगामी भदौ ११ गते बिहान ६ बजेदेखि गोकर्णेश्वर नपा-५ जोरापाटीस्थित इस्टकोल माविमा बेलायतबाट आउने गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डका प्रतिधिनिकाबीच आफ्नो प्रवचन शुरु गर्नुहुनेछ । सतहत्तर जिल्ला र भारतको छ वटा प्रान्त गरी कूल १२ हजार ५०० किलोमिटर पैदलयात्रा गर्नुभएका योगसाधक केसीले यसअघि २१ दिनको जलउपवास, छ महिनाको मौन साधना र नौ दिनको भूतपस्यासमेत गरिसक्नुभएको छ ।
विश्वकै लामो प्रवचन दिई विश्व कीर्तिमान राख्ने उद्देश्यले उहाँले यसअघि नै ८८ घण्टा लामो प्रवचन दिनुभएको थियो । तर प्राविधिक समस्याका कारण उहाँको उक्त प्रवचन गिनिज बुकमा कायम हुनसकेको थिएन । विश्वको सबैभन्दा लामो दाबी गरिएको वक्तव्य÷प्रवचनका बारेमा जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डा रामशरण महतले विश्व कीर्तिमान राख्न गरिने यस प्रकारको कर्मले नेपाल र नेपालीको शिर उँचो बनाउने बताउनुभयो ।